सिल्टल: वेब स्क्रैपिंग डेटा भण्डारण गर्न उत्तम डेटाबेस
पोस्टग्रेसन वेब खननबाट डेटा को ठूलो सेट भण्डारण गर्न प्रयोग गरिएको छ। र स्क्रैपिंग. भर्खरै, पोस्टग्रेन्सले एक इनबिल्ट्रिङ सुविधालाई जेएसओएसबी भनिन्छ, जहाँ "बी" बाइनरीको लागि खडा छ. यदि तपाईले जेएसओएस (जाभास्क्रिप्ट वस्तु सूचना) को रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकिने संरचित डेटा पेस गर्नुहोस् भने, पोस्टग्रेसन पार्स डेटा र भण्डारण डेटा डाटा भण्डार गर्दछ।. यदि तपाईंको स्क्रैपिंग अभियान जेएसओएस आधारित छ भने, पोस्टग्रेसन विचार गर्नको लागि उत्तम डेटा सेट हो.
के पोस्टग्रेसनले चीनी पाठलाई सम्हाल्छ?
केहि वेबमास्टरहरूले प्रश्नचिन्हहरूलाई चिनियाँ पाठहरू ह्यान्डल गर्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ. यस प्रश्नको उत्तर ठूलो हो. डाटाबेस सिर्जना गर्दा तपाईंको एप र डेटाबेस चालक धेरै कारक हुन्. पोस्टग्रेज एक वेब स्क्रैपिंग डेटाबेस हो जसले यूनिकोड समर्थन संग काम गर्दछ. तपाईंको पोस्टग्रेसन डाटाबेस उत्पन्न गर्ने प्रक्रियामा, UTF-8 एन्कोडिङ निर्दिष्ट गर्न विचार गर्नुहोस्.
पोस्टगेस JSONB vs. NoSQL डाटाबेस
NOSQL एक नि: शुल्क र डाटाबेस प्रयोग गर्न सजिलो हो जुन खुल्ला रूपमा डेटा भण्डार गर्दछ. उदाहरणका लागि, यदि तपाईं वित्तीय मार्केटहरूमा डेटा निकाल्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग तपाइँको डेटा भण्डार गरिएको तरिकाको बारे सावधान रहनु पर्छ. यो समस्या कहाँ आउँछ. NoSQL डाटाबेसमा डाटा संरचना जाँचहरू समावेश छैन. यदि तपाइँ यो चरण छुटाउनुभयो भने, तपाईंले डेटा नपढ्न सकिने ढाँचामा समाप्त गर्नुहुनेछ.
पोस्टग्रेन्स, अर्कोतर्फ, ब्लगर लेजर र मार्केटर्सलाई डाटा अखंडता विकल्प प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ. पोस्टग्रेन्स, वेब स्क्रैपिंग डाटाबेस पसलहरू, बाइनरी ढाँचामा डाटा हटाइयो. यो डाटाबेसले HSTORE र JSON संस्करणहरू समर्थन गर्दछ.
पोस्टग्रेन्स विभिन्न भाषामा निकालेका विशाल मात्रा भण्डारण गर्न प्रयोग गरिने शीर्ष-प्रदर्शन डेटाबेस हो।. यो डाटाबेस खोजी खोजी र फिल्टर दुवैको लागी डिजाइन गरिएको छ. पोस्टग्रेन्स JSONB पनि चिनियाँ भाषाका केही क्यारेक्टरहरू प्रबन्ध गर्नका लागि चिनिन्छ. पोस्टग्रेजका अन्य कार्यक्षमताहरू समावेश छन्:
सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा समर्थन समर्थन डेटा;
फिल्टरिंग र खोजी कार्यहरूको छिटो निष्पादन;
एचटीएमएल ट्यागबाट निकालिएको राम्रो-संरचित डाटा भण्डारण गर्दै;
स्क्रैप साइटहरू बाट डेटा पुन: प्राप्त गर्दै र यसलाई पढ्न योग्य ढाँचामा भण्डार गर्दै;
जेएसओएनबी पोस्टग्रेन्स किन?
एक उपयोगी डेटाबेस अनुक्रमणिका अनुकूलित गर्नु पर्छ र वास्तविक समय मा डाटा को डेटाबेस मा डेटा को वर्गीकृत गर्नु पर्छ. ढिलाइ र टाइमआउटले तपाईंको स्क्रैपिंग प्रोजेक्टलाई प्रभाव पार्न नदिनुहोस्. सजिलो पुनःप्राप्तिको लागि विभिन्न डेटाबेसहरूमा डाटा तोड्न पोस्टगेसहरूले आनुवंशिक क्लस्टरहरू प्रयोग गर्दछ.
भण्डारण डेटा प्रतिक्रिया समय र timeouts को बारेमा सबै होइन. पहलू अद्यावधिक गर्दा यो लाग्छ. क्लस्टरहरू उप-वस्तु लोड गर्न र अनुक्रमणिका असक्षम गर्न प्रयोग गर्नुहोस् जब सम्म तपाईले तपाइँको डेटा प्याक गरिरहनु भएको छ. यसले ग्राहकहरूलाई एकै पटकमा धेरै डेटासेट लोड गर्दै मद्दत गर्दछ.
एक साधारण वस्तु अनुक्रमणिका यो कहिल्यै सजिलो भएको छैन. पोस्टग्रेसन वेब स्क्रैपिंग डाटाबेसको साथ, तपाईं विषयलाई अर्को पङ्क्तिमा वर्गीकरण गरेर एक पूर्णांक विदेशी कुञ्जी प्रयोग गरेर रेकर्डलाई सामान्य रूपमा सम्पादित गर्न सक्नुहुनेछ।. तपाईंको नतिजा प्राप्त गर्न विदेशी कुञ्जी पूर्णांक अनुक्रमणिका.
तपाईं डेटा को ठूलो सेट भण्डारण गर्दा दुवै दस्तावेजहरु र पारंपरिक टेबल संरचनाहरु लाई इंटरफ्लेट गर्छन? यसबारे चिन्ता पर्दैन. Postgres JSON B लाई तपाईंको काम गरौं. पोस्टग्रेसन वेब स्क्रैपिंग डाटाबेसको साथ, कुनै पुन: पार्सिङ आवश्यक छैन Source .